အဘယ်အရာကိုဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအမျိုးအစားများ? - SAM ကို-ဗြိတိန်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် » သတင်း » သတင်း » အဘယ်အရာကိုဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအမျိုးအစားများ?
views:0 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2018-10-05 မူလ:ဆိုက်ကို
သင်သည်သင်၏ဝင်းကိုအလှဆင်ချင်နှင့်အာကာသရှိသည်ချင်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သင့်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး သင်လိုချင်တာကိုအတိအကျအရာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာအလှဆင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်, ဒါပေမယ့်လည်းသင်နှင့်သင့်မိသားစုများအတွက်လုံခြုံရေးကိုထောက်ပံ့ပေးမသာ။ ဒီတော့ရရှိနိုင်ပါသည်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအဘယ်သို့အမျိုးအစားများမှာကြည့်ယူပါစေ, ပြီးတော့သင့်ရဲ့အခြေအနေအတိုင်းခြံစည်းရိုးရွေးချယ်နိုင်သည်။
အဆိုပါသီးသန့်တည်ရှိမှုခြံစည်းရိုးသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ထောင်ဝင်းထဲမှာလှုပ်ရှားမှုများကနေအခမဲ့နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာရငျးနှီးသညျ့ပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးပါသည်။ ကနေရှေးခယျြဖို့ခြံစည်းရိုး၏စတိုင်များအမျိုးမျိုးဘေးကင်းလုံခြုံမှုသေချာစဉ်သင့်ခြံထဲမှာတင့်တယ်နိုငျသညျ, လည်းရှိပါတယ်။
semi-ပုဂ္ဂလိကခြံစည်းရိုး၏အကြီးမားဆုံးအင်္ဂါရပ်ရဲ့ privacy နဲ့ Airflow ၏ပြီးပြည့်စုံသောဟန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ခြံစည်းရိုး၏ဤအမျိုးအစားနေဆဲ privacy ကို့လက်ျာငွေပမာဏကိုပေးနေချိန်မှာအလင်းနှင့်လေထုထဲဝငျဖို့ခွင့်ပြု, အ Struts အကြားအနည်းငယ်အကွာရှိပါတယ်။
အဆိုပါ picket ခြံစည်းရိုးတစ်ဦးဂန္ခြံစည်းရိုးစတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကမကောင်းတဲ့စတိုင်စိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။ ဒါဟာနေ့စွဲထဲကကြည့်ရှုနီးပါးဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ခြံစည်းရိုးကို install သောလူအသက်တာ၏အရည်အသွေးကိုပိုမိုလိုက်စားဖြစ်ကြသည်။ အလွန်တော, လူအများစုကကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်။ သင်သည်သင်၏ preference ကိုအညီခြံစည်းရိုးကိုရှေးခယျြနိုငျသညျ, ကျနော်တို့အလှဆင်၏စတိုင်များအမျိုးမျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။
စာတိုက်နှင့်ရထားလမ်းခြံစည်းရိုးလေ့တိရစ္ဆာန်ဝင်းအဖြစ်အသုံးပြုကြောင်းဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့အားလုံးဒီအခြေအနေကိုရှောင်ရှားရန်လိုအကျိုးဆက်များအလွန်လေးနက်ဖြစ်ကြောင်း, သင်သည်သင်၏မြင်းများသို့မဟုတ်အခြားတိရိစ္ဆာန်များခြံစည်းရိုးထဲက run ဖို့မလိုချင်ရမယ်ထင်တယ်, ဒါမှမဟုတ်ပင်လမ်းမပေါ်တွင် run ။ တစ်ဦးကောင်းဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးပုံမှန်သစ်သားခြံစည်းရိုးထက်ပိုပြီးစျေးကြီးပေမဲ့အရမ်းလုံခြုံသည်နှင့်သင်သည်မည်သည့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အထဲကအပြေးမြင်း၏စျေးနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဗီနိုင်းမွေးမြူရေးခြံရထားလမ်းခြံစည်းရိုးကိုရှေးခယျြဖို့ပိုသင့်လျော်သည်။
အဆိုပါရေကူးကန်ခြံစည်းရိုးစတိုင်ဂရုတစိုက်အရှိဆုံးဒေသဆိုင်ရာအဆောက်အဦ codes တွေကိုနှင့်လူရဲ့ဗေဒ fit မှဒီဇိုင်းနှင့်ရေကန်ပတ်လည်မှာအသုံးပြုရန်သင့်လျော်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ရေကူးကန်ခြံစည်းရိုးကိုအနည်းဆုံး4ပေအမြင့်ဆုံးဖြစ်ရပါမည်နှင့်ခြံစည်းရိုးအကွာထက်နည်း4လက်မဖြစ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့မထည့်သွင်းမီဒေသခံစည်းမျဉ်းကိုနားလည်, ပြီးတော့ခြံစည်းရိုးကို install လုပ်ဖို့ဘယ်အရာကိုအရွယ်အစားဆုံးဖြတ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါရာဇမတ်ကွက်ခြံစည်းရိုးကိုပိုမိုသွက်ကြည့်နှင့်သင့်ဝင်းကိုပိုပြီးသွက်စေနိုင်သည်။ ပြည်သူ့ PVC ရာဇမတ်ကွက်များနှင့်ခြံစည်းရိုးသုံးစွဲဖို့နည်းလမ်းတွေ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုတစ်ဦးအလွန်လူကြိုက်များ option တစ်ခုဖြစ်သည်ရှာတွေ့နေကြပါတယ်။ လက်ျာရာဇမတ်ကွက်ခြံစည်းရိုးဒီဇိုင်းကိုချက်ချင်းသငျ့အိမျမှအမြင်အာရုံအကျိုးစီးပွားနှင့်တန်ဖိုးနှစ်ခုလုံးကို add နှင့်သင့်ရှေ့မုတ်ပေါ်မှာထိုင်သို့မဟုတ်သင့်ပြမုတ်သို့မဟုတ်ကုန်းပတ်ပေါ်လျှော့ပေါ့လာသောအခါ privacy ကိုပေးလိမ့်မည်။
အဆိုပါအထက်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး၏စတိုင်လ်၏ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်လည်းတစ်ဦးချင်းစီထုတ်ကုန်တစ်ခုအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ရှိပါတယ်။ သင်ပိုမိုသတင်းအချက်အလက်သိလိုလျှင်သင်မည်သည့်အချိန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကိုသင်ချကြကုန်အံ့မည်မဟုတ်။
ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအမျိုးအစားများ ဗီနိုင်း privacy ကိုခြံစည်းရိုး semi-ပုဂ္ဂလိကဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး ဗီနိုင်းမွေးမြူရေးခြံရထားလမ်း ဗီနိုင်းရေကူးကန်ခြံစည်းရိုး ဗီနိုင်း picket ခြံစည်းရိုး ဗီနိုင်းရာဇမတ်ကွက်ခြံစည်းရိုး